फुटबल गरिमामय पुरस्कार बालोन डी’ओर छैटौ पटक बार्सिलोनाका लिओनेल मेस्सीलाई !! बनाए विश्व रेकर्ड !! - Experience Best News from Nepal
प्रकाशित मिति : सोम, मंसिर १६, २०७६
विश्व फुटबलमा अतिनै सम्माननीय मानिने पुरस्कार बालोन डी’ओरको ६४ औ संस्करण रेकर्ड बालोन डी ओर यस बर्ष २०१९ मा बार्सिलोना स्टार लिओनेल मेस्सीले प्राप्त गरेका छन् ।
फुटबल उक्त गरिमामय समारोह फ्रान्सको पेरिस सहरमा थियटर दु चाटलेटमा सम्पन्न भएको थियो । विभिन्न देशका मनोनित खेलाडी पुरुष एबं महिला फुटबलर एवं क्लबका सदस्यको जमघटमा उक्त समारोह चलेको थियो । बालोन डी’ओर २०१९ को मनोनयनमा परेका विभिन्न ३० खेलाडीको साथै अन्य खेलाडीहरुले उक्त समारोहमा हिस्सा लिएका थिए । २०१८ मा भने क्रोसियन एवं रियल मड्रिड खेलाडी लुका मोड्रिचले जितेका थिए ।
मनोनयनमा रहेका अन्य बाहेक अन्तिम ३ मा बार्सिलोना स्टार लिओनेल मेस्सी, लिभरपूलका डिफेन्डर भर्जिल भ्यान डाइक एबं युभेन्ट्स स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेका थिए । मेस्सीले उक्त बर्ष सर्वाधिक गोल गर्दै बार्सिलोनाका निम्ति ला लिगा एवं व्यक्तिगत तर्फ विभिन्न पुरस्कार मार्फत सु-सम्मानित भएका थिए । उनले बर्ष उत्कृस्ट फिफा अवार्ड, पीचि ची एबं यूरोपियन गोल्डेन बुट जितेका थिए ।
भ्यान डाइकको मद्दत लिभरपूललाई एक सुखद च्याम्पियन लिग र सुपर लिग जिताउनु रहयो भने भ्यान डाइकले बर्ष उत्कृस्ट खेलाडी समेत जितेका थिए । प्रिमिएर लिगमा दोश्रो स्थान रहेता पनि लिभरपूलले च्याम्पियन लिग जित्नुको साथै सुपर कप जितेको थियो ।
५ पटकका बालोन डी’ओर विजेता रोनाल्डोले समेत युभेन्ट्समा नव प्रवेश गर्दै २ ट्रफी जिताएका थिए, क्लबका निम्ति उनले सुपर कोपा इटालिया र सिरी ए जिताएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय खेल अन्तर्गत समेत रोनाल्डोले नेसन्स लिग जिताएका थिए ।
बालोन डी’ओर समारोहमा अन्य कसले के जिते :
कोपा ट्रफी – युभेन्ट्सबाट डी लिग्ट || याकिने ट्रफी – लिभरपूल गोल रक्षक एलिसन बेकर,
एलिसन बालोन डी’ओरको ७ औ स्थानमा अवस्थित यानी मनोनित भएका थिए ।
महिला तर्फ भने मेगान रापिनोले २०१९ महिला बालोन डी’ओर जितेकी थिइन् । तर रापिनो उक्त समारोहमा उपस्थित थिइनन । रापिनोले महिला विश्व कप २०१९ सयुक्त राष्ट्र अमेरिकालाई जिताउन ठुलो योगदान पुर्याएकी थिइन् ।
त्यस्तै युभेन्ट्स स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो समेत उक्त समारोहमा आफ्नो उपस्थिती जनाएनन् ।
बालोन डी’ओर ५ औ स्थानमा मोहमद सलाह परेका थिए ।
Ballon d'OrBarcelonaCristiano RonaldoJuventusLionel MessiLiverpoolVirgil van Dijk